Mugen Chitima Chakagadzira $ 352 Million Madhora, Munyori Akagadzira $ 19,201 - Zvimwe
Mugen Chitima Bhaisikopo Rakaita $ 352 Mamiriyoni emadhora, Munyori Akabhadharwa $ 19,201
Dhimoni Muurayi: Mugen Chitima imovie yeanime ine hupenga huwandu hwekubudirira. Kunyanya mune pfupi nzvimbo yenguva.
Mukati memazuva matatu ekuvhura munzvimbo dzemitambo, yakaita madhora makumi mana emamiriyoni emadhora.
Pakazara, iyo Mugen chitima bhaisikopo rakaitwa pamusoro $ 352 mamirioni emadhora. Kuita iyo yechitatu yepamusoro kutengesa anime bhaisikopo yenguva dzese.
Asi pazasi pechiso pikicha yacho haina kunyatsotaridzika sezvainonzwika.
Koyoharu Gotouge, munyori wechikadzi uye munyori weDhimoni Slayer akangowana $ 19K muchibvumirano.
Mari yekutenda, hongu, asi pachokwadi imari isingaremekedze mari yekubudirira kwave kubva kuDhimoni Slayer.
Kunyanya kana uchitaura nezvazvo Mugen Chitima kubudirira zvikuru sei.
Saka nei munyori weDhimoni Slayer akabhadharwa zvishoma zvishoma?
'Sugimoto akatsanangura izvozvo nekuti Dhimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba ibasa rekutanga raGotouge, vanoonekwa semunyori mutsva, saka mubhadharo wepamberi wekushandiswa kwebasa rekodzero dzemitambo unogona kumhanya zvakaderera zvisingaiti.
Kuti uwedzere kune izvo, zvinoenderana naSusimoto, Mugen Chitima akango sarudzwa kuve firimu panguva yekutanga kushambadzira kweiyo Dhimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba TV anime akateedzana, kufarirwa kwefranchise kwanga kusiri kwakakwirira sezvazviri ikozvino.
yakanakisa anime inoratidza enguva dzese
Ose maviri eaya mativi anoreva kuti, kazhinji, Sugimoto anofungidzira mubhadharo wakapihwa Shueisha wekodzero dzenyaya yaingove inokwana mamirioni mana yen ($ 38,372), iine mamirioni maviri yen ($ 19,201) achienda kuGotouge akananga kumitambo kuburitswa. . ”
Iyo chaiyo yakapararira nyaya nevanyori vema manga muJapan
Vanyori veManga nevaridzi vekodzero muJapan havabvunze mari yakakwana.
Nzira iyo system yacho inomisirwa inoita izvo zvive zvinonetsa, hongu. Asi ini ndiri kushamisika kuti vazhinji havabatane uye vanotsvaga mvumo yemabasa avo. Kunyangwe ivo vanoonekwa se 'nyowani' munyori kana kwete.
Mari yepamberi inotaridzika zvakanaka, asi mari yenguva refu inonaka zvirinani uye inogara iri sarudzo iri nani.
Mune ino kesi, Dhimoni Slayer munyori munyori mutsva saka ndicho chikamu chechikonzero chekuti akabhadharwa zvishoma. Uye havana kuwana ropafadzo dzakawanda.
Makambani mubvunzo waive vasingadi kuzviisa panjodzi sezvo munyori asina track rekodhi yekutaura nezvayo. Uye zvakanaka.
Asi muchokwadi, imhaka zvakare yekuti yemunyori haazive chero zvirinani mune zvese. Kana havadi kukonzera kunetsa.
Mushure mezvose - ivo vari kuzviitira irwo rudo, kwete mari. Asi pamutengo upi mubvunzo waunofanirwa kubvunza.
Vanyori veManga sekutaura kwandamboita, vanofanirwa kuvaka chikuva chavo. Indaneti inovapa mukana kana vaine zvakanaka manga.
Nenzira iyoyo, vanogona:
Inoda mirefu yepamusoro (kana mhindu zvachose).
Kutaurirana zvibvumirano zvirinani.
Kuhwina zvirinani zvibvumirano.
Uye uve nesimba rakawanda pamusoro pemaitiro.
Kuva nechikuva kunokupa mukana, zvichiita kuti munhu wese auye iwe. Kukuisa iwe mune chinzvimbo chesimba.
Ndidzo pfungwa dzangu pahuwandu Koyoharu Gotouge yakabhadharwa vs chiyero icho Mugen chitima bhaisikopo rakagadzirwa muhuwandu.
Porn Star Lacey London Inoti Anoshandisa Yakawanda Nguva Yake Kuona Anime!
Makore gumi nematanhatu ekare Mukadzi weAsia Akapfeka Blue Anime T Shirt Yashayikwa Isipo MuSpanishfield Lakes, Australia
chakanakisa chidimbu chehupenyu anime 2015
ndeupi mukurusa anime nguva dzese